Wụnye nyocha okwu na ụtọ asụsụ na LibreOffice / OpenOffice | Site na Linux
Wụnye nyocha okwu na ụtọ asụsụ na LibreOffice / OpenOffice
1 Supee Nyocha
2 Checktọ asụsụ ụtọ asụsụ
Ọ bụrụ na ị rụnyela OpenOffice / Libreoffice na ọ naghị abịarute okwu anwansị (ọkọwa okwu + okwu) ma ọ bụ akara mgbochi kwekọrọ na asụsụ mmasị gị, ị ga-eji aka wụnye ya. E nwere ụzọ abụọ iji mee nke a: jiri otu akwụkwọ ọkọwa okwu ndị etinyegoro na nchekwa nke ọtụtụ nkesa (dị ka myspell, hunspell, wdg) ma ọ bụ, ọ bụrụ na emeghị nke ahụ, chọọ akwụkwọ ọkọwa okwu na webụsaịtị ndọtị. OpenOffice / LibreOffice ma wụnye ya, dị ka a ga - asị na ọ bụ ndọtị.
a) Wunye akw kw] MySpell
Na Ubuntu nke a di mfe. Iji maa atụ, ịwụnye ngwugwu Myspell kwekọrọ na ọkọwa okwu Spanish, naanị ị ga-emepe ọnụ ma tinye iwu ndị a:
sudo apt-nweta wụnye myspell-es
b) Wụnye dictionary dika ndọtị
1.- Buscar na budata ndọtị kwekọrọ na ọkọwa okwu ị họọrọ.
2.- Gaa Ngwaọrụ> Ndọtị Njikwa> Tinye ma họrọ faịlụ OXT nke ebudatara na nzọụkwụ gara aga.
Checktọ asụsụ ụtọ asụsụ
AsụsụToolTool bụ ihe kacha mma na nyocha ụtọ asụsụ maka OpenOffice / LibreOffice. Gụnyere nkwado maka Bekee, Spanish, French, German, Polish, Dutch, Romania, na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ. Ọ na - arụ ọrụ dị mma nke ịchọta ihe mmejọ nke onye na - ahụkarị okwu anwansị ga - atụ uche, dị ka ikwughachi okwu, okike na ọnụ ọgụgụ, wdg.
LanguageTool anaghị agụnye onye nyocha anwansị.
1.- download ndọtị nke LanguageTool (faịlụ OXT)
Mgbatị a chọrọ Java ka ọ rụọ ọrụ
3.- Gbaa mbọ hụ na ị wụnyela OpenOffice / LibreOffice Java.
N'ihe banyere Ubuntu + LibreOffice, ị ga-etinye ngwugwu ahụ libreoffice-java-nkịtị
sudo apt-nweta wụnye libreoffice-java-nkịtị
Maka ozi ọzọ banyere LanguageTool, m na-atụ aro na ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke oru ngo a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Wụnye nyocha okwu na ụtọ asụsụ na LibreOffice / OpenOffice
myspell-spanish bu aha ngwugwu ma oburu na ha ejiri openSuSE
Ezi! Daalụ maka onyinye!
Jose dị ndụ dijo
AsụsụTool na-amasị m nke ukwuu, mana ọ chọrọ ọtụtụ iwu na asụsụ Spanish. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ebe ịchọta iwu ọzọ, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha kwuru ya otu a. Ma ọ bụghị ya, anyị kwesịrị ịmepụta, amaghị m, usoro mkparịta ụka ebe anyị niile nwere ike ịmepụta iwu karịa ma melite ya.
Zaghachi José Vivas
N'oge ahụ, ọ rụrụ ọrụ nke ọma maka m ... ọkachasị mgbe ị na-ede ihe n'asụsụ Bekee.
mmadu ma otu esi eji SYNONYMS eme ihe maka libreoffice
magburu onwe post. Izu uka abuo gara aga a na m edezi file ederede na LibreOffice ma mebie isi m ebe m ghawa ahazi d
enwetaghị synonymous agbanyụọla 🙁
Iji rụọ ọrụ okwu ndị ahụ ... lelee post a:
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ekele maka isiokwu a enwere m ike idozi nsogbu m site na ndozi nke ọzọ, ọ dị ezigbo mma, site na obere isiokwu ndị a na-enweghị nsogbu na-enweghị ngwụcha nke ewepụtara nye ndị ọhụụ dịka m. daalụ…
Zaghachi ka bwilliamdl
Rodolfo Roque Garcia dijo
Ezigbo ozi, dị irè ma dị mfe: D !!
Zaghachi Rodolfo Roque Garcia
M wụnye myspell si na repositories. Ọ bụrụ na m chọrọ ịwụnye lenguage ngwá ọrụ, m ga-ewepụ ngwugwu m wụnye?
ezi post nyeere m aka nke ukwuu, ọ na-esiri m ike ịwụnye onye nyocha okwu
Daalụ, m na-ahapụ okwu a maka njedebe, mana oge eruola. N'elu achọpụtara m na ọ nọ maka Argentina n'oge. Ekele 😀
Sergio Rodriguez dijo
The onyinye dị ezigbo mma, daalụ. Cheers
Zaghachi na sergio rodriguez
Ezigbo ọrụ rụọ ọrụ nke ọma maka m. Daalụ.
Ana m asị gị nnọọ. Cheers! Paul.
Anọ m na-anwa ịwụnye LanguageTool na Debian 7.7 na Libreoffice 3.5 na mgbe ịmalite ịwụnye ndọtị m nwetara njehie, igbe mkparịta ụka na-emeghe ga-emepe nke nwere okirikiri a machibidoro iwu (uhie uhie na eriri akụ na etiti) ọ na-agwa
(com.sun.star.uno.RuntimeException)…. gaa n'ihu na ala na-ewere ihuenyo niile »
Enwere m sistemụ arụmọrụ dum na Bekee, naanị m chọrọ ịwụnye akwụkwọ ọkọwa okwu na onye nlele ụdị na Spanish ...
Inwe myspell na akwụkwọ ọkọwa okwu zuru ezu maka ị nwere nyocha nke ọrụ, maka na m mere usoro ahụ ma ihe niile na-arụ ọrụ. Mana enwere m otu nsogbu ahụ dịka gị mgbe ị na-achọ ịgbakwunye mgbatị LenguageTool na libreoffice na m na-ele anya na anaghị m ahụ ọtụtụ ozi, naanị na a ga-arụ ọrụ igbe java (nke m nwere ugbu a)
Etu esi wụnye nyocha okwu anwansi site na nzọụkwụ na Ubuntu?
mmadụ enwere ike inyere m aka?
Onwe m nwere ọtụtụ nsogbu ịchọta ndọtị nke ọkọwa okwu Spanish n'ihi na na peeji nke libreoffice, ndọtị nke akwụkwọ ọkọwa okwu Spanish enweghị njikọ nbudata, nke m chọtara nwere ya mana ọ bụ zip na usoro maka ndọtị kwesịrị ịbụ OTX iji mee ka ha rụọ ọrụ. O jere m ozi dị ka ndọtị OpenOffice na enwere m ike ịwụnye akwụkwọ ọkọwa okwu, ana m ahapụrụ gị njikọ ahụ >> http://extensions.openoffice.org/project/es_ANY-dicts dị na nbudata na na njedebe ị na-pịa file abụọ na ị ga-enweta a ịdọ aka ná ntị ebe ị ga-egosi ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji wụnye dị ka ndọtị na libreoffice ma ọ bụ. I nwekwara ike ime ya site na ụzọ egosiri ebe a na post Ngwaọrụ> Njikwa ndọtị> Tinye ma họrọ faịlụ OXT, nke ga-abụ akwụkwọ ọkọwa okwu na nke a. Echere m na ọ na-eje ozi dị ka m
daalụ nke a bụ ihe m na-achọ
Enwere m nsogbu na ndọtị nke LanguageTool, nke a bụ njehie m na-enweta oge ọ bụla m chọrọ ịgbalite mgbatị ahụ.
[jni_uno Bridge error] UNO na-akpọ usoro Java na-edeRegistryInfo: abụghị ndị na-abụghị UNO mere: java.lang.UnsupportedClassVersionError: org / languagetool / openoffice / Isi: Unsupported major.minor version 51.0
Java tojupụtara trace:
java.lang.UnsupportedClassVersionError: org / languagetool / openoffice / Isi: Unsupported main.minor mbipute 51.0
na java.lang.ClassLoader.defineClass1 (Usoro Native)
na java.lang.ClassLoader.defineClass (ClassLoader.java:643)
na java.secure.SecureClassLoader.defineClass (SecureClassLoader.java 142)
na java.net.URLClassLoader.defineClass (URLClassLoader.java 277)
na java.net.URLClassLoader.access $ 000 (URLClassLoader.java:73)
na java.net.URLClassLoader $ 1.run (URLClassLoader.java:212)
na java.security.AccessController.doPrivileged (Usoro Native)
na java.net.URLClassLoader.findClass (URLClassLoader.java 205)
na java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.javaeshi323)
na java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.javaeshi316)
na java.net.FactoryURLClassLoader.loadClass (URLClassLoader.java:615)
na java.lang.ClassLoader.loadClass (ClassLoader.javaeshi268)
na com.sun.star.comp.loader.RegistrationClassFinder.find (RegistrationClassFinder.java:52)
na com.sun.star.comp.loader.JavaLoader.writeRegistryInfo (JavaLoader.javaPress399)
Ọ bụla echiche idozi nsogbu a? Enyochala m igbe dị na nhọrọ java na gburugburu ogbugbu bụ Sun Microsystem 1.6,0_33
Anyị na-akwado ka ị jụọ ajụjụ a na ajụjụ anyị na azịza ọrụ a na-akpọ Jụọ Site na Linux ka obodo dum nwee ike inyere gi aka na nsogbu gi.
Ogbogu Okonji1 dijo
Daalụ Enyi! XD
Enwerem Linux Deepin kedu ka m ga-esi tinye nyocha anwansi? Onye ọ bụla nwere ike inyere m aka.
Iji mezue isiokwu ọ ga-adị mkpa ịgbakwunye akwụkwọ ọkọwa okwu nke synonyms, n'ihe banyere Spanish na Spain ọ ga-abụ na ndọtị nke Open Linguistic Resources: http://extensions.openoffice.org/en/projectrelease/diccionario-de-correccion-ortografica-separacion-silabica-y-sinonimos-en-espanol-67
Emiliano Nieto Avalo dijo
Abụ m onye ezumike nka na m nwere PC laptọọpụ nke m ji atụrụ onwe m ụtọ nke ukwuu kemgbe
ọrụ m dị ka onye nchịkwa.
Enwere m OpenOffice 4.1 arụnyere, mana o nwere obere akwụkwọ ọkọwa okwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nyocha ọ bụla. Maka nke m ga-achọ ịwụnye otu, ọ bụ ezie na achọghị m ya
M ga-achọ ịbụ onye na-enye onyinye ọ bụrụgodi obere.
Daalụ na ekele
Zaghachi Emiliano Nieto Avalo
Daalụ maka itinye arịrịọ m na akaụntụ. Ma enwere m obi abụọ ma ọ bụrụ na m ga-enweta ya
agbanyeghị m ga na-arịọ ruo mgbe m ga-enweta ya.
Ekele m gị niile, Emiliano
emiliano naeto avalo dijo
Etosiri m ịwụnye, dicc. Ntọala ụtọasụsụ. Etuola m
Agam ekele gi maka inyere m aka inweta ya.
Enwere m ike icheta ụfọdụ onyinye, ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ihe, ọfụma
Abụ m onye ezumike nka na kedu ka ị ga-esi ghọta, enweghị m ego fọdụụrụ, mana m nwere
Dịka m gosiri email m, ị nwere ike iziga m ụfọdụ ozi ma ọ bụ nkọwa gbasara
Ekele na ekele. NWOKE
Zaghachi ka emiliano nieto avalo
Enwere m obi anụrị maka OpenOffice.org m, mana akwụkwọ ọkọwa okwu ọ nwere dị mma c, orrto
ma ọ bụghị na m nwere mmasị na ntakịrị ihe m maara banyere nzukọ gị, mana m
obi di uto nke ukwuu.
Ọ ga-amasị m ịnweta ozi doro anya banyere otu esi esi wụnye onye anwansi. Enwere m ụlọ ọrụ ihe 4.1
ma o nweghị onye na-enyocha ya.
Ekele na ekele Emiliano.
Ngozi Chukwu dijo
Daalụ, ọ rụrụ ọrụ na-enweghị nsogbu na
Ọmarịcha. Ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu nye m. Daalụ nke ukwuu.
Flamini: isiokwu akara ngosi maka KDE
Otu esi edozi usoro jụrụ nke laptọọpụ anyị